(Waxaa laga soo toosiyay Iswisarlan)
Iswisarland (afka jarmalka: die Schweiz. afka faransiiska: la Suisse, afka taliyaaniga: Svizzera), amab midawga iswisarland waa jamhuuriyad fadaraali ah oo ku taala badhtamaha yurub waxa ay ka koobantahy , 26 gobol. caasimdana waxa u ah magaalda Beren wadanka iswesarland waxa uu raacaa siyaasad dabada uga baxsan tan caalamka ee caadiga ha. xaaladan siyaasadeed ee ka gadisan ta badi caalamku ku dhaqmo waxa uu wadankani haystay ilaa sanadii 1515 Switzerland, si rasmi ah Isbahaysiga Swiss, waa waddan madax banaan oo Yurub ah. Waxay ka kooban tahay 26 kantoon, iyo magaalada Bern waa fadhiga maamulka federaalka.   [note 1] Jamhuuriyadda federaaliga waxay ku taallaa galbeedka, bartamaha iyo koonfurta Yurub,  [note 4] iyo waxaa xuduud u leh Talyaaniga koonfurta, Faransiiska galbeed, Jarmalka xagga woqooyiga, iyo Austria iyo Liechtenstein xagga bari. Switzerland waa waddan aan debedda lahayn oo juquraafi ahaan loo kala qaybiyay Alps, Plateau Swiss iyo Jura, oo leh guud ahaan 41,285 km2 (15,940 sq m) (dhulka dhul dhan 39,997 km2 (15,443 sq mi)). Inkasta oo Alps uu ku nool yahay qaybta ugu badan ee degaanka, dadka reer Swiss ee qiyaastii siddeed milyan oo qof ayaa inta badan ku yaal dhulka, halkaas oo magaalooyinka ugu waaweyn laga heli karo: kuwaas oo ka mid ah labada magaalo ee caalamka iyo xarumaha dhaqaalaha Zürich iyo Geneva.
1 asal ahaan maxay tahay kalmada iswisarland
3 dhulka Wadanka iswisarland waa wadan buuralay ah in kabadan 7 milyan oo dollar waxa ahadheeya buuraha alab
asal ahaan maxay tahay kalmada iswisarlandEdit
waxa ay ku taalaa iswisarland badhtamaha qaarada yurub waxa ay xuduud kala leedahay dhanka waqooyi wadanka jarmalka galbeedkana wadanka faransiis ka koonfurtana wadanka taliyaani ga
dhanka barina wadamada Austriya iyo wadanka yar ee lekhtanishtayn
dhulka Wadanka iswisarland waa wadan buuralay ah in kabadan 7 milyan oo dollar waxa ahadheeya buuraha alabEdit
dadka kunool wadanka iswisarlan waxa ay gaadhayaaan ilaa todobo milyan oo qof
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Iswisarland&oldid=190070"
Last edited on 26 Jannaayo 2019, at 16:54
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Jannaayo 2019, marka ee eheed 16:54.